"Freedom" is the another name of "God".
"လွတ်မြောက်ခြင်း" ကိုယ်၌က "ဘုရားသခင်" ၏ အခြား အမည်နာမ ဖြစ်၏။
လွတ်မြောက်မှု သည် နက်ရှိုင်း ၍ ဖြူစင် နူးညံ့သော အရာ ဖြစ်သည် ဟု ကျနော် နားလည် ထားပါ သည်။ အကြောင်းမူ လွတ်မြောက်မှု ဟူသော ဝေါဟာရ သည် ဘုရားသခင် ဟူသော ဝေါဟာရ နှင့် တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်သောကြောင့် (ဝါ) တူမျှ သောကြောင့် ဖြစ်၏။
The Main Message of Buddha is “FREEDOM”.
ဗုဒ္ဓ၏ ပင်မ ဒေသနာ သည် လွတ်မြောက်မှု “မောက္ခ” သာ ဖြစ်သည်။ အလားတူ – ဂျိန်း တို့ ဖခင် – မဟာဝီရ ကလည်း ဣဿရ (ဖန်ဆင်း ရှင်၊ ဘုရားသခင်) ကို ငြင်းပယ် ၍ လွတ်မြောက်မှု ကိုသာ လက်ခံသည်။ ဤသည် ကပင် လုံလောက် ပါ သည်။ မောက္ခ/ မော့(ခ်)ရှ် (Moksha) ဟု ၎င်း ဘာသာ ဖြင့် ခေါ်ဆို သော လွတ်မြောက်မှု သည် မင်း အစိုးရ လက်အောက်မှ၊ စနစ် တစ်ခုအောက်မှ၊ အတွေး အကြံ တို့ အောက် မှ လွန်မြောက် ခြင်း ကို မဆိုလိုသေး။ – အခြား တစ်စုံတစ်ရာ အတွက် လွတ်မြောက် လာ ခြင်း မဟုတ် သေး ။ ယင်းသို့ လွတ်လပ် လာခြင်း သည် လွတ်မြောက် ခြင်း အစစ် အမှန် မဟုတ် သေး။ ဗုဒ္ဓ နှင့် မဟာ ဝီရ တို့ ညွှန်းဆိုသော လွတ်မြောက်မှု မှာ – မိမိ အတ္တမ ကို အခြေ အတင် ကျေညက် နားလည် ပြီးသော၊ ပြီးပြည့်စုံသော လွတ်လပ်မှု ဖြစ်၍ – ချမ်းမြေ့မှု အတိ ပြီးသော လွတ်မြောက်မှု ကို သာ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ယူသည်။
တစ်နည်း အားဖြင့် — လွတ်မြောက် ခြင်း ဟူသည် တစ်စုံ တစ်ခု မှ ထွက်ခွာလာခြင်း လည်းမဟုတ် သလို၊ တစ်စုံ တစ်ခု အတွက် ရည်ရွယ် ရည်စူး ထားခြင်း လည်း မဟုတ်ပေ။ လွတ်မြောက်ခြင်း သည် နားလည် သိမြင် ခြင်း (ဝါ) မြင်ခြင်း ၌သာ ပကတိ ကိန်းဝပ် ၍ အတ္တမ ၏ အညွှန်းဘောင် အလွန် တွင် ရှင်းလင်းစွာ တည်ရှိ ပြီးသား ဖြစ် သည်။
Just Sketch !
Filed under mood, Osho Tagged with freedom, Osho